5 Best Natural Hot Springs Na Europe | Save A Train
Home > Inzọ Njem Italytali > 5 Best Natural Hot Springs Na Europe
osimiri, osimiri, na ọdọ mmiri abụghị nanị mara mma eke ebube na-na- uru atụmatụ a ezumike gburugburu. Anyị na-akpọ anyị 5 Best Natural Hot Springs Na Europe na ihe karịrị uru a nleta na-enyemaka nke Save A Train gbaa ụgbọ okporo ígwè.
5 Best Hot Springs Na Europe 1: Aix Les Bains Riviera Of The Alps, France
Aix Les Bains, Riviera nke Alps bụ obodo na-ekpo ọkụ, kwụsịrị na incredibly osisi na mbara Lake Bourget. Nke a bụ otu n'ime 5 Best Natural Hot Springs Na Europe na bụ hụrụ n'ime Savoie french ebe, ama n'ihi na ya Alps massif obi. Ọnụnọ nke dị ọcha mmiri, na ọtụtụ ịnweta nti ido, niile na gburugburu obodo, edu ya ndammana a thermal omenala. Nke a kpokọtara ebe n'ezie na-enye gị ndị kasị mma nke ọdịdị gị nke ọma ịbụ. Na Aix les Bains Alps Riviera, eke na nkà mmụta ọgwụ na brimstone ọgaranya mmiri ikpokọta na-enye a ezi imu.
Geneva ka Aix Les Bains Le Revard Train
Lausanne ka Aix Les Bains Le Revard Train
Paris na Aix Les Bains Le Revard Train
Bern ka Aix Les Bains Le Revard Train
Easy na-e si dị nnọọ banyere n'ebe ọ bụla Europe na-enyemaka nke Save A Train, Tuscany obụrede mbụre otu n'ime ndị kasị idyllic iyi dị ọkụ ke ererimbot. Ya mere, e na-ijuanya na ọ bụ na anyị na ndepụta 5 Best Hot Springs Na Europe! na 500 lita ọgwụgwọ mmiri a na-e si n'ọdọ nke a mgbawa ugwu na ndagwurugwu ahụ ọ bụla nke abụọ, a mmiri mmiri bụ kpamkpam dị ọcha. N'ihi 99.5 ogo F mmiri na ọmarịcha Italian odida obodo gburugburu ya, Obi abụọ adịghị na ị ga-ileghara n'ime a miri ala nke ntụrụndụ a mmiri.
Nke a kwes spa-ekwu nwere dịghị hà n'ebe ọ bụla n'ụwa. Etu ọnụ mmiri na- ndammana nwere ike, dị ọcha ma ọgaranya ịnweta salts. A onyinye nke uwa nke jupụtara n'ime Spa ọdọ mmiri dị ka ọ na-aga site a spring mkpakọrịta nwoke na nwaanyị azụ ọtụtụ puku afọ. Ntak na-agbalị ya maka onwe gị?
Florence na Grosseto Ụgbọ oloko
Perugia ka Grosseto Ụgbọ oloko
Viterbo ka Grosseto Ụgbọ oloko
Rome ka Grosseto Ụgbọ oloko
5 Best Hot Springs Na Europe 3: Aqua Dome - Tyrol, Austria
Ebe ọ bụ na narị afọ nke 16, ndị a na-eleta Tyrol na-erite uru na-agwọ Njirimara nke ya iyi dị ọkụ. Ugbu a, i nwere ike ịnụ ụtọ oke baths na thermal ọdọ mmiri jupụtara 90 ogo F ka 97 ogo F ọkụ thermal mmiri. Gịnị na-eme a na mmiri dị iche bụ levitating thermal mmiri ọkwá, jupụta na ọkụ, ịhịa aka n'ahụ oche, na whirlpools.
The anya ini enye okụtde ije nke mbido spa ulo enyo ịma mma nke okike na gburugburu ebe. Wood, nkume, ìhè na – n'ezie – mmiri bụ akụkụ nke mma mma. A ngụkọta nke 12 ime ụlọ na n'èzí ọdọ mmiri na-agba gị igwu mmiri ka onwe gị ịkpafu. The ime ụlọ ọdọ mmiri jikọọ na atọ pụtara ìhè n'èzí ọdọ mmiri na stilts site waterways.
Hot Springs Na Europe na na-atụrụ ndụ na akụkọ ihe mere eme? Ọ na-ada ka a ezi ụzọ nne Mmetụta ụfọdụ ịwụ ndepụta ihe na onye na-aga na. Na obi nke obodo Bath, ị ga-achọta Thermae Bath Spa. An award emeri eke spa ebe i nwere ike ugbu a-asakwa ahụ na Britain na ndammana na-ekpo ọkụ, ịnweta ọgaranya miri. Dị nnọọ ka Celts na Rom mere n'ihi 2,000 afọ ndị gara aga. ọ, Otú ọ dị, nọgidere na-abụ n'ụlọ Britain naanị eke thermal mmiri. Anata kacha ntụrụndụ ahụmahụ. Gaa na nke a award emeri ụbọchị spas ịnweta ọgaranya mmiri ụtọ na 92 degrees F ma jiri nlezianya na e spa agwọ ọrịa.
5 Best Hot Springs Na Europe 5: Gellert bat, Hungary
Anyị zọpụta ndị kasị mma n'ihi na nke ikpeazụ n'ime anyị akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka obi dị ka eze, ọbụna n'ihi na dị nnọọ awa ole na ole, ị kwesịrị ị na maa gaa Gellert bat na Hungary isi obodo, Budapest. Na ya embellished Ọdịdị ị ga-ahụ nnukwu ọkụ baths edoghi na Rome ogidi. Mmiri ndị a nwere ihe dị iche iche bara uru na-agwọ ọrịa ọrịa ogbu na nkwonkwo na nsogbu orthopedic ndị ọzọ. Gellert Bath mepere 1918 àjà ọgwụ mmiri agwọ ọrịa iji otu miri ala iyi na Knights nke St John eji na narị afọ nke 12, na mgbe e mesịrị na Turks na-eche na invigorating ike nke ịnweta ọgaranya miri.
Njikere na-enweta ezumike na ya kasị pụrụ iche? Mgbe ahụ isi na n'elu Save A Train na akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi na onye ọ bụla n'ime anyị ghota nke 5 Best iyi dị ọkụ na Europe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Natural Hot Springs Na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hot-springs-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ya / tr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#bestholidaytips #bestthermalbath #hotsprings #sawụna #thermalbath europetravel trainjourney